DARYEELKA FOOJIGNAANTA KA DIB UBAX: SIDA LOO DIYAARIYO DHIRTA JIILAALKA - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo diyaariyo peonies jiilaalka
Xitaa dilalka aan la qabin ee bilawga ah ee cimilada qabow waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah.
Dad badani ma dhibaateeyaan shaqooyinka noocaas ah, oo wax walba ka dhigi kara fursad.
Laakiin beerta khibrad leh waxay ogtahay sida loo diyaariyo peonies xilliga qaboobaha, iyo raalli ahaanshaha aqoonta qof walba.
Joojinta waraabinta iyo quudinta
Ka dib markii uu dhammeeyey muddada ubax, geedka hadda uma baahna qoyaan isku mida isla markii uu jiro xilli firfircoon. Xilliga xagaaga ee waraabka ee loogu talagalay waraabuhu waa 10-25 litir oo biyo ah ka yar baadiyaha oo leh isbeddel toddobaad ah. Tan iyo bilowgii xilliga dayrta ma jirto baahi loo qabo tirooyin dareere ah, qoyaankuna si tartiib ah ayuu hoos u dhacayaa.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh inaad si aad u hesho liiska ee noocyo peony geedka caan ah.
Waxaa si tartiib ah: diidmada degdegga ah ee waraabinta waa adag tahay xitaa ubaxyo qaangaar ah, ma aha in la xuso dhalinyarada. Xasuuso in daryeeshka peonies ka dib markii ubax waa lagama maarmaan si mustaqbalka ay ku farxi doonaan leh buro dhalaalaya, iyo ma aha si ay u "xiraan xilli" sida ugu dhakhsaha badan.
Waxaad codsan kartaa nidaamkan waraabinta: 25 litir, toddobaad ka dib ama laba, horeba 15-20, iyo wixii la mid ah joojinta dhamaystiran.
Waa muhiim! Si loo gaaro tirada ugu badan ee burooyinkeeda ubaxyada, florescences oo qoyan ayaa isla markiiba laga saaraa peonies. Haddii ay rabaan in ay helaan ubaxyo waaweyn, ka dibna ka bax oo kaliya meelaha inflorescences.
Sebtembar iyo bilowgii bisha Oktoobar waa waqtigii ugu fiicnaa ee lagu quudiyo. Naftooda, peonies aad ayay u nugul yihiin quudintooda, iyo bartamaha xilliga dayrta waxay ka sii fiican yihiin. Xaqiiqdu waxay tahay in toddobaadyada dayrta hore, marka ubaxu uu dhammaado, xididdadu waxay sii wadaan inay si qoto dheer u koraan, iyo soo bandhigida qayb cusub oo nafaqooyin ah waxay noqon doontaa mid waxtar leh.
Ujeedadaas, waxaa loo isticmaalaa xalalka potassium-phosphorus. 15 g of phosphorus iyo potassium waxay ku filnaan doontaa 10 litir oo biyo ah. Isku dar ah ayaa soo shubtay si aanay u dhicin qoorta geedka. Astaamaha isku mid ayaa lagu dabaqi karaa foomka qalalan (waa lagu iibiyaa kiniiniyada). Ka hor inta aan la hirgelin hirgelinta, baadiyaha waxaa si fiican u waraabiyey oo si siman u rusheeyaa kiniiniga la jajabiyey ee ceelka.
Ma taqaanaa? Shiinaha waxay soo saartey xiriir gaar ah oo loo yaqaan 'peony', halkaasoo weli loo tixgeliyo warshad royal ah. Waxay ka timid Boqortooyada Dhexe ee uu u yimid Yurub. Peony waa mid ka mid ah calaamadaha muhiimka ah ee dhaqanka Shiinaha. Isku-dhafka ubaxa iyo balastar-yaraanta ayaa muddo dheer noqotey muuqaal sawireed ee suugaanta shiineeska iyo rinjiyeynta.
Growers growers inta badan waxay leeyihiin su'aallo - peonies ayaa yaraaday, iyo waxa la sameeyo xiga ee ciidda. Wax walba waa sahlan halkan: xididdada waxaa lagu quudin jiray mullein mullein (marka la barbardhigo biyaha 1/10). Marxaladdan, laguma talinayo in ay ka qaybgalaan Bacriminta dabiiciga ah iyo biyaha macdanta leh. Nidaamka isku dhafan sidoo kale ma aha mid waxtar leh.
Waxaan soo bandhignaa qarsoodiga ah ee daryeelka xawaaraha ee bannaanka furan.
Tani waa qaybta ugu muhiimsan ee diyaarinta miirka. Ka tegidda guga horraanta waa wax aan loo baahnayn - markaa fikradaha ayaa laga yaabaa inaanay "qaadan" dabada jilicsan jiilaalka. Waxa ugu muhiimsan waa in la qaado waqtiga saxda ah. Iyada oo ku xiran gobolka, tani waxay noqon kartaa tobanka sano ee la soo dhaafay ee Oktoobar iyo badhtamihii Nofembar. Haddii aan qaadanayno "sida sayniska", ka dibna diyaargaroobidda pion ee jiilaalka ayaa go'aaminaya waqtiga ugu wanaagsan ee manjooyin maalmaha ugu horreeya kadib dhaxan. Waa muhiim in ciidda ay qalalan tahay.
Waqtigaan, sprouts horayba u lumi doona dhulka, iyo wax-u-qabashada noocaas ah ma waxyeelayn doono geedka. Iska yaree walxaha dabiiciga ah sida ugu hooseeya ee suurtogalka ah adigoo aan ka tegin qeylada sare (2-3 cm waa ku filan). Dhammaan qaybta dhulka ayaa laga saaraa (ubaxyada iyo afkoda caleemaha). Kadibna waa la soo ururiyaa oo la gubaa.
Waa muhiim! Peony waxaa si fudud loo aqbalay nooc kasta oo ciid ah. Kaliya marka laga reebo waa "carrada" acidic iyo meelaha ay ka buuxaan cayayaanka.
Qalabka geedka, algorithm wax yar ayaa ka duwan: waxay isku dayaan in ay qaybta dhulka ku hayso.
Qaarkood waxay isticmaalaan alaab la gooyo daboolka, laakiin tani maaha mid u qalantaa - waxay noqon kartaa meel wanaagsan oo loogu talagalay isu-imaatinka iyo dhalashada cayayaanka. La jiifso caleemaha u dhow ayaa sidoo kale la ururiyaa lagana saaraa. Beeraha qaar ka dib dhacdadan oo kale ayaa sameeya dharka laysku daro ee dharka iyo lafaha (60/40%).
Ma taqaanaa? Giriigyadii qadiimiga ahaa waxay rumaysteen in peonies ay bogsiin karaan 20 cudur. Sidaa darteed, ma jirin beer beer ah oo aan la korin karin. Illaa iyo 1800naad, ubaxyadaas waxaa loo isticmaalay oo kaliya sida dhirta daawooyinka, noocyo kala duwan sida xilliga cuntada.
Ma jiraan wax dhib ah, inkastoo dadka cusubi ay khaladka ku sameeyaan qaladaadka aan khibradda lahayn. Halkan waxaa ku qoran tusaalooyin sida "blunders" marka la gooyo:
Ka saarida hore ee biqil. Haddii dayrta ay diirran tahay, ka dibna afkoda ayaa kori doona mar labaad waxayna dib ugu soo kaban doontaa hoos marsada. Dhibicda heerkulka xaaladdan oo kale ayaa daciifisa dhirta.
Dhibaatada kale waxaa lagu xoojin doonaa jarida. Sidaa darteed rhizome si fudud u qudhmi karaa.
Ka tag qayb yar oo ah asliga ah oo ka sarraysa heerka dhulka (3-5 cm). Waa qalad si aad u maleyneyso in ay adagtahay in la soo gaabiyo. Taas bedelkeeda, nidaamkani wuxuu joojiyaa koritaanka iyo ubax sanadaha soo socda.
Xaaladuhu way kala duwan yihiin, laakiin si loo wanaajiyo waqtiga iyo ka saarista afkoda waddanka ayaa wali lagama maarmaan ah, haddii kale halista ugu dambeysa ee ubaxu ugu dambayntii. Sidaas peonies gooyaa ee dayrta waa waa in.
Si aad u ilaaliso rhizome ka soo dhaxan, codsiyada godadka mulching. Qalabka ugu fiican ee "busteyaal" waa humus iyo peat qalalan. Miisaanka lakabka waxay ku xiran tahay xaaladaha cimilada ee aag gaar ah: haddii 10-12 cm ay ku filan tahay meelaha cimilada leh, kadibna 15-20 cm ayaa looga baahan doonaa qaybaha waqooyiga.
Faa'iidooyinka guryaha hoygoodu waa badan yihiin - ma aha oo keliya kuleylka, laakiin sidoo kale quudin ciidda leh walxo faa'iido leh. Wixii dhirta "da'da", sidoo kale waa koboc dhaqaale oo aad u fiican.
Maaddooyinka sida aan ku habboonayn daadinta:
balka iyo dhirta.
Arrinta noocan oo kale ah "organic matter" waxay dhalinaysaa horumarinta xayawaanka fangaska cudurada loo yaqaan "pathogenic fungi", iyo soosaarka waraaqaha ayaa si xoog leh u ciribtira ciidda.
Iyada oo bilawga guga, sida "daboolka" sida laga saaro, laakiin ma aha mid gebi ahaanba: lakabka khafiifka ah ee mulch ayaa ka tagay godka, kaas oo xakameyn doona koritaanka cows.
Waa muhiim! Haddii ay jirto baahi loo qabo manjooyin hore, ka tag 3-4 caleemo walba. Sidaas dhirta waxay ku ururin doontaa xoogga koritaanka burooyinkeeda mustaqbalka.
Hadda waxaan ognahay sida loo daryeelo peonies xilliga dayrta iyo sida ugu diyaargarowga ah ee ubaxyada loogu talagalay jiilaalka u eg yahay. Iyadoo la tixgelinayo shucuurtaas, waxaad awoodi doontaa inaad ku ilaaliso ubaxyo qurxoon oo ku yaal aaggaaga mustaqbalka. Midabado badan oo dhalaalaya oo nolosha ah!